Ganacsatada gobolka Banaadir oo soo dhoweysay kala diristii Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha - Home somali news leader
Home NEWS Ganacsatada gobolka Banaadir oo soo dhoweysay kala diristii Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha
Ganacsatada gobolka Banaadir oo soo dhoweysay kala diristii Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha
Qaar kamid ah Ganacsatada ugu waaweyn Gobalka Banaadir oo maanta kulan ku yeeshay Magaalada Muqdisho ayaa soo dhoweeyay go’aankii ay Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya ku kala dirtay Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha dalka 28-kii bishii dhamaatay ee December.
Ganacsatadaan ayaa sheegay in muddo ku dhow 20 sano uu khilaaf culus u dhaxeeyay xubnaha Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha islamarkaana uu khilaafkaas ragaadiyay howlo badan oo ay ka qeyb-qaadan jireen, kuwaas oo isugu jiray Gurmadka dadka dhibaateysan iyo ka qeyb-galka dhismaha dalka gaar ahaan wadooyinka Muqdisho.
Guddomiyaha Ganacsatada Suuqa Bakaaraha Xasan Mire ayaa sheegay in muddo ka badan 12 sano aysan Ganacsatadu laheyn matalaad rasmi ah islamarkaana ay la kulmeen caqabado badan.
“Muddo 12 sano ka badan waxaan soo marnay marxalado adag mana helin matalaad rasmi ah, ma jirin wadashaqeyn iyo wadajirka ganacsatada Soomaaliyeed laakiin hadda waxaan rajeynayaa in ay dhamaatay waayahaas oo wadajir iyo wax-wada qabsi noo bilaaban doono” ayuu yiri Xasan Mire oo ah Guddoomiyaha Ganacsatada Suuqa Bakaaraha.
“kala diristii Rugta Ganacsiga waxay aheyd mid xaq ah oo xalaal ah waana taageersanahay 100% “ ayuu yiri Guddoomiyaha qeybta dharka ee Ganacsatada Suuqa Bakaaraha oo goobtaasi maanta ka hadlay.
Ganacsatada maanta kulanka ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in la-lunsaday lacag dhan 16 Milyan oo doolar, taas oo loogu talagalay dhismaha waddooyinka Muqdisho balse ma jirto ilo ka madaxbanaan oo warkaan xaqiijin kara.
Si walba ha ahaatee, masuuliyiinta maanta kulanka yeeshay ayaa taageeray guddiga kumeel-gaarka ah ee Wasaaradu dhistay iyagoo ugu baaqay in doorasho xalaal ah ku qabtaan mudadii loo qabtay ee 60-ka cesho ah.
Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya ayaa todobaadkii hore kala dirtay Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya kadib markii ay sheegtay in lagu sameyn doono dib u habeyn iyo tayeyn maamulka ah.
ganacsatada Banaadir oo soo dhoweysay kala dirista rugta ganacsiga iyo warshadaha
Previous articleWith control of the US Senate, all eyes are on Tuesday’s diversionary elections in Georgia
Next articleSacudi Carabiya iyo Qadar oo ku heshiiyay inay dib u furaan xadka ay wadaagaan